Abathuthukisi beHaiku OS basebenza emachwebeni e-RISC-V ne-ARM | Kusuka kuLinux
I-Haiku uhlelo olusebenzayo lomthombo wokusebenza njengamanje ekuthuthukisweni okugxile ngqo kwikhompyutha yomuntu siqu naku-multimedia.
Kukhuthazwe yi-BeOS (Yiba Uhlelo Lokusebenza), I-Haiku ifisa ukuba uhlelo olusheshayo, olusebenzayo, olusebenziseka kalula nolulula ukufunda, ngaphandle kokudebeselela amandla alo kubasebenzisi bawo wonke amazinga. Iphrojekthi yeHaiku yaziwa ngezidingo zayo maqondana nekhwalithi yezinguqulo zokusakaza.
1 Mayelana neHaiku
2 Abathuthukisi bafuna ukuletha i-Haiku ku-RISC-V naku-ARM
Kuze kube ngo-2009, ayikho inguqulo ehlanganisiwe ebitholakala ukulanda, ukuze kuvinjelwe ukufinyelela kubantu abanesibindi ngokwanele sokuhlanganisa uhlelo ngokwalo futhi bagweme ukudumaza abasebenzisi ngaphandle kolwazi oludingekayo lokwenza kanjalo.
Uhlelo lusekelwe ngqo kubuchwepheshe be-BeOS 5 futhi kuhloswe ngokuhambisana kanambambili nezinhlelo zalolu hlelo lokusebenza.
Ikhodi yomthombo yezinhlelo eziningi zokusebenza zeHaiku isatshalaliswa ngaphansi kwelayisense yamahhala ye-MIT, ngaphandle kweminye imitapo yolwazi, ama-codecs wezindaba, nezinto ezithathwe kwamanye amaphrojekthi.
Isistimu igxile kumakhompyutha wakho, isebenzisa i-kernel yayo, eyakhiwe ngesisekelo sokwakhiwa kwe-hybrid, elungiselelwe ukuphendula okuphezulu ezenzweni zomsebenzisi nokwenza kahle kwezicelo ezinemicu eminingi.
Uhlelo lwefayela lusebenzisa i-OpenBFS, esekela izimfanelo zefayela ezinwetshiwe, i-journaling, izikhombisi ezingama-64-bit, ukusekelwa kokugcina amathegi we-meta (kufayela ngalinye, ungagcina izimfanelo ngendlela yokhiye = inani, elenza amafayela afane nemininingwane) nezinkomba ezikhethekile ukusheshisa ukukhetha kwenhlangano yohlaka lwemibhalo kusetshenziswa izihlahla ze- "B + tree".
Kusuka kukhodi ye-BeOS, i-Haiku ifaka imenenja yefayela le-Tracker ne-Desktop Bar, amakhodi womthombo avulwa ngemuva kokumiswa kokuthuthukiswa kwe-BeOS
Abathuthukisi bafuna ukuletha i-Haiku ku-RISC-V naku-ARM
Manje Abathuthukisi bohlelo lokusebenza lweHaiku baqale ukudala amachweba okwakhiwa kwe-RISC-V ne-ARM.
Futhi ukuthi i-ARM ibaluleke kakhulu ekugcineni, Abathuthukisi beHaiku baphumelele ukudala amaphakheji wokuqalisa ukusebenzisa amafayela adingekayo endaweni encane yebhuthi.
Ngakolunye uhlangothi ukwakhiwa kwe-RISC-V igxile ekuqinisekiseni ukuhambisana ezingeni le-libc (ukusekelwa kohlobo "olude olude", olulinganiswa ngokuhlukile nge-ARM, x86, Sparc, ne-RISC-V).
Enqubeni yokusebenza emachwebeni ku-codebase enkulu, izinhlobo ze-GCC 8 kanye ne-binutils 2.32 zibuyekeziwe.
Ekwenziweni kwemikhiqizo ye-Haiku ye-RISC-V ne-ARM, iziqukathi ze-Docker sezilungisiwe, kufaka phakathi konke ukuncika okudingekayo.
Futhi, inqubekelaphambili seyenziwe ekwandiseni uhlelo lokwabiwa kwememori lwe-rpmalloc. Izinguquko ku-rpmalloc kanye nokusetshenziswa kwesilondolozi sento esehlukile kwenza ukuthi kube nokwenzeka ukunciphisa ukusetshenziswa kwememori nokunciphisa ukuhlukaniswa.
Ngenxa yalokhu, ngesikhathi senguqulo yesibili ye-beta, imvelo yeHaiku ingafakwa futhi ilayishwe ezinhlelweni ezine-256 MB ye-RAM., futhi mhlawumbe nangaphansi. Ukucwaningwa kwamabhuku nokuqondiswa kokufinyelela kwe-API sekuqalile (ezinye izingcingo zizotholakalela izimpande kuphela).
Okwamanje onjiniyela babika ukuthi amachweba alezi zakhiwo asesigabeni sokuhlola.
Manje sisesigabeni sokuhlola. Leli bekuyithuba lokuhlanza izingqinamba ezithile ze-ARM port ezibandakanya i-libstdc ++ exhunywe ngokwezibalo.
Manje sekungenzeka ukuthi kwakhiwe amaphakheji e-bootstrap, kepha ukuhlanganiswa kukaHaiku uqobo kuhlangabezana nezinkinga ezifanayo zokubopha kamuva. Okwamanje isixazululo ukusebenzisa i-LLD (kusuka ku-llvm / clang) esikhundleni sesixhumanisi sendabuko se-ld.
Ngasohlangothini lwe-RISC-V, okwamanje kubhekwe ekutholeni i-libc yethu ukuthi ifake okungenani ukuxhaswa okwanele kohlobo "long double" uhlobo oluhlukile kuzakhiwo eziningi (i-ARM isebenzisa izingcezu ezingama-64, i-x86 isebenzisa i-96, ne-sparc ne-ppc Ama-bits angama-128 kepha anezakhiwo ezahlukahlukene).
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Abathuthukisi beHaiku OS basebenza emachwebeni e-RISC-V ne-ARM
I-Internet EdgeX 1.0 yesikhulumi se-modular samadivayisi nezinsizakalo ze-IoT